Permalink Reply by swe moe on May 29, 2011 at 14:25
Permalink Reply by 32nceukz5jzvz on May 29, 2011 at 17:09
Permalink Reply by ကောင်းမွန်ဇန် on May 29, 2011 at 21:46
ကျနော်ကကောင်းမွန်ဇန်ပါဗျ........ကျနော်ကကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၇င်အ၇မ်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ....သင်ပေးပါဦး....အကုန်လုံးကကျနော့် ထက်ဆ၇ာကျမယ်ဆိုတာနားလည်ထားပါတယ်......ကူညီကြပါနော်.........
Permalink Reply by 1skj3djpf84qy on May 30, 2011 at 9:09
Permalink Reply by Ivy Maia on May 30, 2011 at 18:14
thanksalot ! very useful post !
Permalink Reply by 37fyuw6lego57 on May 30, 2011 at 21:39
အခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ...။ ပို့တင်ပေးတဲ့သူရော.. ဖတ်တဲ့သူတွေပါ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်.....
Permalink Reply by zwe on June 1, 2011 at 11:49
Permalink Reply by Shoug Wah on June 6, 2011 at 22:05
Permalink Reply by swenutunn on June 8, 2011 at 15:14
Permalink Reply by zinzinnaing on June 8, 2011 at 20:14
တစ်ခုသိချင်ပါတယ်။ english သီချင်းကောင်းလေးတွေ ဘယ်ဆိုဒ်မှာနားထောင်လို့ရလဲလို့
Permalink Reply by ကေားဆက် on June 12, 2011 at 13:35
Permalink Reply by Ye' Paing Phyo on June 12, 2011 at 21:31
Brilliant~! Nice article .. I can't thank you enough for your vibrant sharing. I ever face like it in Q&A program.